एनआरएन वडा अध्यक्ष,कर्मचारीका भरमा स्थानीय तह ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
एनआरएन वडा अध्यक्ष,कर्मचारीका भरमा स्थानीय तह !
जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीका भरमा स्थानीय तह सुम्पिदा, स्थानीयले सेवा पाएनन् भनेर स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गाँउ–गाँउबाट वडा सदस्यदेखि अध्यक्ष, मेयरसम्म चुनिएको धेरै भएको छैन । प्रशासनिकदेखि विकास निर्माणका काममा आफैले चुनेको प्रतिनिधि आएपछि सहज होला भन्ने आशा गरेका पर्वत पैयाँ गाँउपालिका वडा नं.४ का स्थानीयहरु अहिले आफैले चुनेको वडा अध्यक्षको अनुहार गाँउमा कमै मात्र देख्न पाउँछन् ।
वडा अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठ जापानमा बस्छन् । जापानमा बस्ने मात्रै होइन, उनी गैर आवसीय नेपाली संघ एनआरएन जापानका नेता समेत हुन् । गाँउमा चुनाव जितेपछि स्थानीयको घरदैलोमा हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि अधिकांश समय जापानमा बिताउने गरेका छन् । गाँउपालिका अध्यक्ष खगेन्द्र तिवारीका अनुसार अधिकांश समय अन्य व्यक्तिलाई कार्यवाहक बनाएर उनी विदेशतिर हुन्छन् ।
श्रेष्ठ अहिले काठमाडौंमा जारी गैर आवसीय नेपाली संघ एनआरएनको सम्मेलनमा व्यस्त छन् । विहीबार भएको मतदानको लाइनमा श्रेष्ठ पनि थिए । त्यसपछि हामीले उनलाई भोट हाल्नुभयो भनेर सोध्यौं । आफू भोट हाल्ने लाइनमा उभिएको तर भोट नहालेको बताइरहेको थिए ।
उनले भोट नहालेको दाबी गरेपनि उनले एनआरएन रजिष्टेशनपछि पाइने पास भिरेका छन् । जुन पास लिएर मात्रै मतदान गर्न पाइन्छ । आफ्नो घर काठमाडौंमा भएको र परिवार जापान भएकाले परिवार भेट्न गएको समयमा गलत प्रचार भएको दाबी गर्छन् ।